Isiphumele obala yacaca eyombango wokubusa izwe iJordan - Bayede News
Isithombe: ngu-Attila Kisbenedek
U-Erdogan usephinde wayiqhatha iTurkey ne-EU
IJordan izithola isendaweni engayejwayele kulandela ukuboshelwa endlini kweNkosana uHamzah bin Hussein esolwa ngetulo lokuketula umbuso weNkosi u-Abdullah II bin Al-Hussein. NgeSonto, izikhulu zikaHulumeni wakuleli lizwe zithe zivimbe itulo lale Nkosana obekuhloswe ngalo ukuqumba phansi iNkosi ngokwelekelelwa abathize abasuka emazweni ayizimbangi. Le nkulumo iyaphikisana neputshukiswe endlini yoBukhosi ekhomba ukuthi leNkosana iboshelwa ukuveza labo abehlulwa ukwenza umsebenzi nabakhohlakele.
Ekuzweni lolu daba nakuba kuphikisana ngokuwumongo, i-United States of America (USA) nomakhelwane basheshe baphumela obala ngokweseka iNkosi u-Abdullah II. Lokhu bekulindelekile kwazise leli lizwe yilo elifukamele abasePalestine abahlwithwa izwe labo yi-Israel esisondelene kakhulu nalawa mazwe, liphinde lifukamele abaseSyria ababalekiswa uthuthuva olwabangelwa ukugxambukela kwawo lawa mazwe eSyria ngemizamo yokuqumba phansi ubuholi bukaBashar al-Assad.
INkosana uHamzah iyaziwa ngokungesabi ukugxeka labo abangenzi kahle nabanomhobholo kuHulumeni.
Njengoba leli lizwe lingaphansi kwengcindezi yezomnotho nokuthutheleka kwabantu abasuka komakhelwane abanezimpi, le Nkosana isiphenduke umlomo walabo abangeneme ngokwenza kombuso.
INkosi u-Abdullah selokhu yathatha izintambo zombuso kulandela ukufa kukayise iNkosi uHussein bin Talal ngowe-1999, ibivele ihlala inokuhhahhamezwa ngezinye izindlu zaMakhosi ezikhosele ngaphansi kobuholi bakhe kodwa konke lokhu ibiyithola indlela yokukuchiliza ngaphandle kokubopha nokudweba umugqa wempi. Okungakho kuthusa uma sekungumfowabo ozwakalisa ukungenami ngokuholwa kwezwe iqinise isandla. Ikakhulukazi ngoba le Nkosana selokhu yaphucwa igunya lokuthatha izintambo uma kufa iNkosi ngowezi-2004 ayikaze ikhombise intshisekelo yokuhlwitha izintambo kumfowabo.
Emuveni kokuthatha izintambo zombuso, iNkosi u-Abdullah II yaqoka iNkosana uHamzah njengozongena uma ifa, kodwa kwathi uma kuphela iminyaka emihlanu yamuphuca leli gunya yanikeza iNkosana yayo uHussein bin Abdullah. Nakuba kungakaze kube khona ukukhuluma okukhombisa ukungezwani phakathi kweNkosi neNkosana uHamzah kodwa zikhona izikhathi lapho uHamzah ezwakalisa ukuzwelana nabangeneme ngoHulumeni kanti kamuva nje ubonakala esondelene kakhulu nezindlu zamanye amakhosi ezivame ukuhlalisa lubhojozi iNkosi. Lokhu kukhishwa inyumbazane kweNkosana kuholwa ngu-Ayman Safadi ongusekela Ndunankulu ophinde abe nguNgqongqoshe Wezangaphandle.
NgoMgqibelo, umholi wombutho wezempi uJenene uYousef Huneiti uyalele le Nkosana ukuthi iyeke yonke into eyenzayo ihlale ngayodwana kodwa yakuziba lokhu. USafadi usola iNkosana ngokuqopha inkulumo phakathi kwayo noJenene uHuneiti yayidlulisela kwabathize emazweni angaphandle abasebenzisana nayo ukuqumba phansi ubuholi baseJordan. USafadi uthi kusobala ukuthi bese lisuka ekuxoxweni itulo leNkosana kodwa selifinyelela lapho selizofezekiswa khona.
Osolwa ngokusebenzisana neNkosana ongusomabhinizisi uBassem Awadallah. USafadi uphinde waveza nokuthi u-Awadallah nguye osebenzisana noRoy Shaposhnik oyisisebenzi kumnyango wokugcina izimfihlo zezwe. UShaposhnik uyavuma ukuthi ungumngani weNkosana uHamzah kodwa uyaphika ukuthi kukhona akuhlanganisayo nomnyango wokugcina izimfihlo kwazise ngokokuzalwa ungowakwa-Israel.
Akuvumayo ukuthi uvumile ukubhacisa iNkosana nomkayo ngesikhathi imtshela ukuthi isola sengathi iyazingelwa kodwa lokhu akusho ukuthi kuyingxenye yetulo. Akucaci ukuthi iNkosana izobekwa yini icala iyoziphendulela enkantolo okanye into ezoxoxwa ngasese.
Okuxakayo nokungacaci ngalezi zinsolo ukuthi imaphi lawa mazwe okuthiwa asebenzisana neNkosana kwazise i-USA, iSaudi Arabia, i-United Arab Emirates (UAE), iBahrain, iQatar, i-Oman neKuwait bonke basheshe baphumela obala bathi nanoba kwenzekani bona beseka iNkosi u-Abdullah. Lokhu kushiya amazwe afana ne-Israel, i-Iran, iTurkey, iSyria, iLebanon ne-Egypt bengabasolwa.
Kodwa, asibonakali isizathu ebesingadala lawa mazwe ukuthi afune kushintshe ubuholi eJordan kwazise leli lizwe yilo eliyikhaya labantu lokukhosela uma kusuka uthuthuva kuwona wonke lawa mazwe futhi alibanga nayo inhlanhla yezimbiwa phansi ezifana nowoyela, igolide nokunye.
Izakhamuzi zaseTunisia zihlabe inhlabaluhide zikhala ngamaphoyisa
Konke lokhu kufikisa imibuzo yokuthi imali lawa mazwe uSafadi awashoyo futhi yini ewaholela ekutheni abe yingxenye yalolu mbimbi olubalulwayo.
INkosi u-Abdullah inobudlelwano obuhle nawowonke amazwe omhlaba ngisho ne-Israel ehlale imchukuluza ngolweJerusalem okwanikezwa yena igunya lokuyiqapha leli lizwe eseliyihlwitha.
Ngaphakathi eJordan awukho umuzwa wokungenami ngeNkosi nakuba ukhona owokungenami ngabasondelene nayo kwazise amandla ayo ancike kwamanye aMakhosi neSishayamthetho esilawulwa amaqembu ezepolitiki. Nakuba kungacaci ukuthi leli tulo belizofezekiswa kanjani kodwa okungangabazeki ukuthi konke lokhu kuzovuna iNkosi u-Abdullah evele ikhothwa phansi kuleli lizwe.
UNgqongqoshe Wezokuvikela kwa-Israel uBenny Gantz, ukuqinisekisile ukuthi izwe lakhe alisoze lafuna ukugudlula iNkosi yaseJordan ngoba yiyo ekwazi ukulawula isimo phakathi kwabo nePalestine kwazise bayizigidi ezili-10 abasePalestine abakuleli lizwe.
I-USA ize ilikhokhele izigidigidi leli lizwe ukuze likwazi ukumelana nomthamo wabasePalestine osaqhubeka nokwanda kwazise ingcosana yePalestine esele okuyiWest Bank i-Israel iyayigwamanda kanti neGaza isikhishwe inyumbazane kulandela ukubuswa iHamas ehlomela ukuvuselela imingcele emidala yePalestine yangaphambi kwempi yangowe-1967 okuzoyishiya ineqeqebana lomhlaba i-Israel.
nguNtobeko Shozi Apr 9, 2021